Dreame T20, ihe dị elu nke na-arụ ọrụ dị elu nke na-ehicha ihe eji eme ihe [Analysis] | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 22/11/2021 12:00 | General, Nyocha
Ngwa teknụzụ ọ bụla nke na-achọ ime ka ndụ gị dịkwuo mfe bụ nnabata na Actualidad Gadget, ọ nweghịkwa ike ịbụ ma ọ bụghị ya na ndị na-ehicha oghere na-eji aka, ngwaahịa na-eweghara n'aka ndị na-ehicha ikuku robot yana n'ihi ọrụ ya na uru ọ bụla, oge kacha mma na-aghọ. ngwaahịa nke ọchịchọ.
Chọpụta na anyị ka Dreame T20 si arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bara uru ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi dị n'otu ọnụahịa.
1 Ihe na imewe, ika nke ụlọ
Ihe na imewe, ika nke ụlọ
Dreame maara na ọ ga-adị iche na ndị isi ndị ọzọ na mpaghara ahụ site n'inye atụmatụ ya na ihe ndị ọ họọrọ, dị ka ndị anyị hụrụ na ngwaahịa ndị gara aga. Nke a Dreame T20 enweghị ike ịbụ obere, ihe na-ehicha oghere nke a na-eme n'èzí nke plastik na-egbuke egbuke nwere ụdị isi awọ dị iche iche, ebe ngwa ndị ahụ bụ matt graphite gray plastic na brackets metal na aluminom na-acha uhie uhie. Ihe a niile na-enye anyị ngwaahịa dị ntakịrị, nke na-adịghị agafe gram 1,70.
Zụrụ ya na ọnụ ahịa kacha mma na Amazon.
Na-agbanwe agbanwe na nke na-eguzogide ọgwụ, karịrị ihe a pụrụ ịnya isi site n'ichepụta ya. Ihe na-apụta agbakọta nke ọma ma dabara Rịba ama na anyị nwere ihuenyo LED na azụ nke na-enye anyị ozi zuru ezu maka iji ya, yana bọtịnụ maka ijikwa ọkwa ike dị iche iche na mkpọchi, ka ị ghara imekọrịta ihe na ihuenyo n'amaghị ama. Usoro "omume" nke onye na-ehicha ihe na-ekpo ọkụ bụ site na ihe na-akpali akpali, nke dị na aka, ya mere onye na-ehicha ọkụ ga-arụ ọrụ naanị mgbe anyị pịa ya. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọrụ ọ na-erughị ala, n'onwe m na-ahọrọ ya ka ndị na-agbanye / gbanyụọ n'ihi na anyị nwere ike ijikwa ike na karịsịa nnwere onwe.
Ọtụtụ n'ime unu na-eche naanị ike, yabụ anyị ga-ekpughere ya dịka otu n'ime data mbụ. Na ihe Dreame na-enye dị ka "turbo mode" anyị ga-enweta ihe ruru pascal 25.000, nke a dị elu karịa nkezi nke n'etiti 17.000 na 22.000 nke ndị na-ehicha oghere na ọnụahịa ọnụahịa a na-enyekarị. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ihe nzacha dị elu, nke a na-ahụkarị na ụdị ngwaahịa a, ee, ọ dịghị mfe iji dochie ma ọ bụ dị ọcha dị ka ọ na-eme na nsụgharị gara aga (na ọnụ ala) nke Dreame hand vacuum Cleaners. , M chere na iji chebe ntapu.
Banyere nkwụnye ego, ọ na-enye ihe ruru 600 milliliters, nkwụnye ego nke, dị ka ọ bụlarị akara ngosi nke ika ahụ, meghere site na ịpị naanị bọtịnụ na nke na-enye anyị ohere ịdebe ihe fọdụrụ n'ụzọ dị mfe. Otu n'ime ihe kacha amasị m gbasara ndị na-ehicha oghere Dreame bụ kpọmkwem ịdị mfe nke ịwụfu tankị ndị a yana ikike ha, nke m na-agwa gị dịtụ elu karịa ihe ika ahụ n'onwe ya na-ekwe nkwa anyị.
Ugbu a, anyị ga-agwa gị gbasara batrị ya, anyị nwere 3.000 mAh na mkpokọta na maka ụgwọ zuru ezu ọ ga-ewe ihe dị ka awa atọ ma ọ bụrụ na anyị ejiri chaja nke etinyere na ngwugwu ahụ, n'agbanyeghị ma anyị na-eji ọdụ chaja ma ọ bụ ọ bụghị. Onwe m, ana m akwado ka ịnwe ọdụ chaja dị njikere n'ihi na ọ na-eme ka ọrụ ijikọ ya na nchekwa nke ngwa na-enweghị ọnụọgụ ọ nwere. Na mkpokọta ha na-ekwe nkwa anyị nkeji 70 nke nnwere onwe na ọnọdụ "eco", nke na-ebelata nke ukwuu na ọnọdụ "turbo". Ka o sina dị, anyị enwetala nsonaazụ dị nso na nnwere onwe nke Dreame kwere nkwa.
Banyere ngwa, ọdịnaya nke igbe Dreame T20 bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ihe ijuanya n'ihi nnukwu onyinye ya, nke a bụ ihe anyị nwere:
Nrọ T20 Vacuum
Mgbatị ígwè tube
Ahịhịa akwa akwa Smart Adaptive
Isi nchaji nwere skru gụnyere
Eriri nkenke nozulu
Mpempe akwụkwọ ziri ezi sara mbara
tube na-agbanwe agbanwe maka akụkụ
Obi abụọ adịghị ya, ị gaghị enwe ihe ọ bụla na Dreame T20 dị ka ngwa, N'azụ azụ bụ ụdị "dị elu" ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha ga-azụrụ iche.
N'oge a na-eji ya eme ihe kwa ụbọchị, mmetụta anyị dị mma, karịsịa na mkpọtụ, nke na-adịghị agafe decibels 73 na "turbo" mode, ndị Dreame na-arụ ọrụ nke ọma na okwu nke mkpọtụ na ọ na-egosi, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-eburu n'uche na eziokwu na ọ dịghị emerụ ike. N'akụkụ nke ya, Na ha na-enye anyị batrị mbughari bụ nkwa, ma site na ngbanwe, yana n'eziokwu na anyị nwere ike ịrụzi ha na anyị agaghị atụfu ngwaahịa ahụ kpamkpam naanị n'ihi na emebiwo ụfọdụ sel nke batrị lithium.
Agbaghara m na ngwa broom gụnyere ụfọdụ obere ọkụ LED na-enyere anyị aka ịchọta unyi nke ọma, ma ọ bụghị, eziokwu nke gụnyere Smart Adaptive brush Ọ dị mkpa maka ndị anyị nwere anụ ụlọ ka ọ na-enyere anyị aka iwepụ ntutu isi na sofa na ọbụna na uwe anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ.
N'ihe gbasara ngwa, Dreame T20 zuru oke na nke bụ eziokwu bụ na anyị anaghị atụfu ihe ọ bụla, ngwaahịa fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ a. N'akụkụ nke ya, atụmatụ agba ahụ mara mma na karịa ihe niile na-adịgide adịgide.
Anyị na-eche ngwaahịa ihu n'agbanyeghị na ọ bụghị ọnụ ala, Ọ ga-abụ ihe dị ka euro 299 dabere na ire ere, ọ na-enye anyị ụzọ ọzọ na-adịghị agwụ agwụ, Otu n'ime ndị kacha mma autonomies na ahịa na N'ezie nkwa nke Dreame, a veteran ụlọ ọrụ nwere nnukwu aha na ngalaba. N'ezie ọ bụghị "ntinye ntinye", mana ndị doro anya na ha na-achọ ụdị ngwaahịa a ga-ahụ na Dreame T20 ezigbo enyi, anyị achọpụtala na ọ bụ ngwaahịa zuru oke na anyị chọrọ. soro gi kee ya .
Ihe na: November 22 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: November 22 nke 2021
Ngwa ngwa dị iche iche
Yiri nnọọ ka nsụgharị Dreame ndị ọzọ
Enweghị LED na broom
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Dreame T20, ihe nhicha aka dị elu yana arụ ọrụ [Analysis]